Ngokucofa nje unombala opheleleyo weendawo zemifanekiso kwi-Illustrator | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezo zinto zinamaqhinga e-Adobe ngumlingo omsulwa kwaye zisigcinela ixesha kunye nomzamo. Kukwi-Illustrator apho abonise iqhinga elitsha lokufaka umbala kuyo yonke iphalethi ngonqakrazo olulula.
Ewe unqakrazo olunye, kwaye uya kutshintsha umbala ipallet epheleleyo ngalo lonke ixesha lokonga kuthetha. Sithetha ngento yokuba kuya kufuneka ukhethe umaleko ngolwaleko ukutshintsha umbala welaphu lonke kwaye ngoku, ngobuqhophololo obutsha be-Illustrator, ungayenza ngonqakrazo olunye nolulula.
I-Adobe iza kusindisa kunye notshintsho lokukhumbula kwakhona indawo yonke yomfanekiso othile. Inqaku elitsha lomfanekiso we-Illustrator ivumela ukuba sihambise imibala kwimifanekiso neefoto emsebenzini wethu ngendlela elula kakhulu.
Kufuneka singenise imifanekiso ekubhekiswa kuyo kwilayibrari yethu ukuze I-Illustrator ikhathalela ukuyihlalutya kwaye ikhuphe iipelethi zazo imibala. Nje ukuba le nkqubo yenziwe, konke ekufuneka sikwenzile kukukhetha nawuphi na umfanekiso ukufaka imibala yawo emsebenzini wethu.
Oko kukuthi, siza kubona ukuba njani yonke imibala izaliswa kwangoko ngokungathi ngomlingo. Eli qhinga litsha leAdobe liza kusivumela ukuba senze umahluko kumbala wawo nawuphi na umsebenzi kwi-jiffy kwaye ke sithathe isigqibo sokuba yeyiphi esinokuyithatha siyinike umthengi kwaye ekugqibeleni athathe isigqibo sokuba ufuna ntoni okanye umfanele.
Kukwanje asazi ukuba iAdobe iza kukhutshwa nini esi sixhobo sitsha kubasebenzisi kwi-Illustrator; ukuba, ngendlela, ngekhe kubi ukuyifumana kwi-Photoshop kuyo yonke into eyithethayo.
Ngapha koko, iya kuba ngumcimbi wexesha elincinci apho unokonwabela i-Illustrator kwaye loo nto intsha intsha ithetha ukuba ngonqakrazo olunye unokufaka imibala kuyo yonke indawo ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha kwaye uyisebenzise ukwenza isigqibo sokuba ngowuphi umbala oza kuza kakuhle. Ungaphoswa njani I-Adobe isifundisa indlela yokucima ngokulula izinto yemiboniso yevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Adobe ibonisa iqhinga elitsha lokucofa umbala omnye kwi-Illustrator
Inqaku le-fucking le-shit